Huru kuvandudza pane chinzvimbo chaDaniel Bryan WWE - Mishumo - Wwe
Huru kuvandudza pane chinzvimbo chaDaniel Bryan WWE - Mishumo
Daniel Bryan anonzi abviswa muzvirongwa zveWWE nguva pfupi yadarika. Chirevo chinotaura kuti akabviswa muzvirongwa pamwechete nevamwe vanoita vasisiri nekambani iyi.
Chirevo chazvino na Wrestling Mucherechedzi Live's Bryan Alvarez akataura kuti WWE parizvino iri kushanda muchirongwa, icho chaanofunga kuti chingave mutambo wevhidhiyo.
WWE haizove nechikonzero chekubhadhara mari kune avo vasisiri nekambani. Nekuda kweizvozvo, zviri nyore kuona kuti sei Daniel Bryan uye vanoverengeka vekare maSuperstars vabviswa muchirongwa.
'Handina chokwadi kana iri mutambo wevhidhiyo kana kuti chii asi chimwe chezvirongwa izvi zvinosanganisira pachena varwi muWWE, vakaudzwa nhasi kuti munhu uyu, munhu uyu, munhu uyu, munhu uyu, munhu uyu haasisina WWE uye mumwe wevanhu vavakataura ndiDaniel Bryan, 'akadaro Alvarez. 'Chaizvoizvo, haasi nekambani, ichokwadi, asi icho chiratidzo chekuti panguva ino, [ivo] vachamuburitsa muchirongwa chipi nechipi ichi nekuti haasi nekambani iyi,' akadaro Alvarez nezve mamiriro ezvinhu aDaniel Bryan. (H / T. WrestlingNews )
Alvarez akataura kuti kana Daniel Bryan achizoshamisika adzoka kuWWE, avo vane chekuita muchirongwa chiripo pamwe vangangodaro vasina kuziva nezvazvo.
Will Daniel Bryan achadzokera kuWWE?
Daniel Bryan muWWE
Chibvumirano chaDaniel Bryan neWWE chakapera kutanga kwegore rino, nemutambo wake wekupedzisira uchiuya uchipesana neRoman Reigns muna Kubvumbi.
Pakanga paine inoshuma pakutanga kwegore rino reWWE neJapan kukurudzira New Japan Pro-Wrestling vachikurukura nezvehukama hwekushanda .. Chirevo chakati chimwe chezvikonzero zvikuru zvechirevo ichi ndechekuti WWE ibvumidze Bryan kukwikwidza muJapan.
Kupera kwe #SmackDown yaive. #Ndatenda IweBryan @WWEDanielBryan pic.twitter.com/gbwqGUxb3b
- WWE (@WWE) Chivabvu 1, 2021
Zita raBryan rakataurwa paWWE terevhizheni nguva pfupi yadarika mukukakavadzana pakati peEdge neRoman Reigns paSmackDown. Izvo zvataurwa, chirevo chazvino chinotaura kuti iko-pachiso kushandiswa kwezita raBryan hakuratidze kuti achadzokera kukambani.
Iwe unofungei nezve kubviswa kwaBryan muchirongwa ichi chisinganzwisisike? Ridza mhere mune zvakataurwa pazasi.
Wrestling mafeni, unganai! Tinoda kusangana newe kuti uzive zvimwe zvatinogona kukuitira. Bhalisa pano
zvekuita nemunhu anonyepa
zvinorevei kana mukomana akakutarisa uye asingatarisi padivi paunomutarisa
ndine shamwari asi hapana shamwari yepamwoyo